कस्ता पुरुषसँग ‘सेक्स’ गर्न रुचाउँछन् महिला? « AayoMail
कस्ता पुरुषसँग ‘सेक्स’ गर्न रुचाउँछन् महिला?
2021,28 August, 7:46 pm
काठमाडौं – तपाईंहरुले विचार गर्नु भएकै होला वा सुन्नु भएकै होला, कुनै पुरुषसँग धेरै महिलाल‍े सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्। अधिकांश महिला उक्त पुरुषप्रति आकर्षित भएका हुन्छन्। विनाकारण त कुनै महिला सम्बन्ध बनाउँदैनन्। तर, कुनै पुरुष यस्तो मामिलामा सधैं अघि किन आउँछ त, के कारण होला कि अधिकांश महिला कुनै पुरुषप्रति सेक्सका लागि विशेषरुपमा आकर्षित हुन्छिन् त?
आउनुस् जानौं कस्ता पुरुषप्रति महिला सेक्सका लागि आकर्षित हुन्छिन् त,